3D dareemayaal ayaa gaari doona terminaalka Android sanadka soo socda | Wararka IPhone
IPhone X wuxuu leeyahay a farsamada aynaan arag Marna kuma xirna aaladda mobilada sida dhismaheeda TrueDepth, kaamirooyin iyo dareemayaal ku yaal wejiga hore ee xarunta. Qalabkan lagu dhisay aaladda Apple, waxaad ku siin kartaa horumariyeyaasha bilaash si ay uga faa'iidaystaan ​​tikniyoolajiyadan cusub.
Laga soo bilaabo qaar ka mid ah warbaahinta Ingriiska sida DigiTimes waxay hubiyaan in dareemayaashaan 3D (sida kuwa lagu daro iPhone X) gaari kara aaladaha Android inta lagu jiro 2018. Soosaarayaasha Shiinaha ee Huawei, Xiaomi ama Oppo ayaa ku soo dari kara tikniyoolajiyadan dhamaadka sare ee qalabkooda mustaqbalka.
IPhone X ayaa bilaabmay: dareemayaasha 3D ayaa halkan jooga
Illaa iyo hadda waxaan caddeynay tikniyoolajiyada 'iPhone X' inay tahay mid gaar ah, laakiin dhismaha 'TrueDepth complex' oo leh dareemayaal 3D iyo kaamerooyin aan horay uga hadlay ayaa ahaa mid ka mid ah caqabadaha soo saaray soo saarista Terminalka cusub ee Apple. Soosaarka tikniyoolajiyadda noocan ah weli ma weyneyn sidaa darteedna khibrada wax soo saarku kuma filneyn in lagu qanciyo dalabka wax soo saar ee Big Apple doonayay.
ka macluumaadkii ugu dambeeyay tilmaam bixiyeyaasha dareemayaasha 3D sida Largan Prevision, Sunny Optical, Orbbec ama Himax Technologies soo bandhig dareemayaashaan 3D shirkadaha cusub ee la xiriira adduunka Android sida Huawei ama Xiaomi. Saadaal Dheer Waxaa loo yaqaan mid ka mid ah bixiyeyaasha qaar ka mid ah qalabka Android iyo qaar ka mid ah qalabka la xiriira dareemayaasha iPhone X:
[…] Largan, oo hadda leh faa iidooyin xagga tiknoolajiyadda, rukhsadaha, awoodda iyo naqshadeynta, wuxuu leeyahay xalal loogu talagalay baaritaanka 3D iyo muraayadaha indhaha si amarro joogto ah looga helo macaamiisha jira.
Mararka qaarkood waxaan dhayalsanaa qalabka aan ku haysano aaladahayaga iyo dhamaan cilmi baarista iyo horumarka ku dhex jira. Apple waxay maalgashi ku sameysay malaayiin doolar si loo gaaro isku xirnaanta dareemayaal, muraayadaha indhaha iyo kaamirooyinka infrared-ka kuwaas oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu furmo xarunta kaliya iyo wejigiisa.
Shirkadaha kale sida Orbbec waxay raaceen wadadii Apple waana la ogyahay inay yihiin cilmi baarista iyo soosaarida kamaradaha 3D fudud, algorithms cusub iyo dareemayaal cusub inay u soo bandhigaan shirkadaha inay ku soo bandhigaan qalabkooda cusub ugana yaabiyaan dadka isticmaala teknolojiyadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » 3D dareemayaal ayaa gaari doona terminaalka Android sanadka soo socda